Kante oo timo deystay, Martial oo madaxa xiirtay, Hazard iyo Mane oo bidaar leh & Xiddigaha sida ay u kala duwan yihiin kaddib Karaantiilkii COVID-19 – Gool FM
(Yurub) 21 Maajo 2020. Xiddigaha kubadda cagta ciyaara ayaa dib uga soo laabtay karaantiilkii ay ku jireen ee uu sababay Coronavirus, waxaana ay dib ugu soo noqdeen tababarka kooxahooda.
Markii ay dib u soo laabteen ayaa la arkay muuqaalkooda oo ka duwan sidii hore, kuwo qaarkood timaha ayaa ku baxay, kuwo madaxa oo dhan ayay xiirteen, halka kuwo kale ay tinta midabaysteen.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegaynaa qaar ka mid ah xiddigaha waa weyn ee kubadda cagta iyo sida muuqaalkoodu isku bedelay, mudadii labada bilood ahayd ee ay karaantiilka ku jireen.
Jamaahiirta kubadda cagta ayaa mar qura yaabay markii sawirro laga soo qaaday N’Golo Kante oo tababarka kooxdiisa Chelsea dib ugu soo laabtay kaasoo timuhu ay si weyn ugu bexeen.
Barkley ayaa isaguna dib ugu soo laabtay xarunta tababarka ee Cobham, isagoo qaab jarriin cusub la soo muuqday, waxaana xiddiga xulka qaranka England uu la soo muuqday isagoo timaha dhulka iska dhigay, isla markaana sii deystay gar weyn, inkastoo uusan la heer ahayn garkaasi mid Giroud.
Xiddigan reer Talyaani ee kooxda tababare Frank Lampard ayaa isaguna waxa uu ka mid ahaa xiddigaha maqaska iloobay, waxaana uu Chelsea kula soo laabtay isagoo timaha ku bexeen.
Waxa uu ka mid noqday xiddigaha timaha caddeystay ee kubadda cagta, horay waxaa sidaan oo kale u sameeyey ciyaaryahanno sida Lionel Messi iyo Neymar Jr ah, xiddigan Lamela ayaana hadda ku biiray xiddigaha timaha caddeystay.
Haddii aad u maleysay in Kante u egyahay mid aan la aqoonsan karin oo leh timo badan, markaan Young wuxuu hubaal ku jiraa xiddigaha aan sida fudud lagu garan karin, ciyaaryahanka kooxda Inter Milan wuxuu cadeeyay inuu la jaan qaaday booskiisa sanadihii la soo dhaafay, haatana timahiisa oo badan ayuu la soo laabtay.
Waxaan ogayn isagoo ka soo qeyb qaatay waajibaadka Miletari ee dalkiisa South Korea, markii uu soo dhammaystay tababarkaasna waxa uu dib ugu soo laabtay England, waxaana uu hadda la soo muuqday qaab jarriin cusub oo tintiisa ah.
Bilowgii karaantiilkaba ciyaaryahanka Man United waxa uu qaaday tilaabo weyn, isagoo timihiisii oo dhan dhulka iska dhigay, waxaana u xiirtay xaaskiisa iyagoo ku sugan guriga.
Ma’ahan wax aan caadi aheyn in la arko Pogba oo tijaabo cusub sameysanaya oo timaha qaab cusub oo jaranaya, laakiin inaanu timo lahayn haba yaraatee waxay ahayd tallaabo geesinimo leh, waxaana uu xiddiga reer France uu soo laabtay isagoo aan tilmo lahayn.
Daafaca kooxda Arsenal ee Bellerin ayaa isaguna ku booday timihiisii, waxaana uu timo la’aanka kula biiray labada ciyaaryahan ee Kooxda Man United, Martial iyo Pogba.
Xiddiga Kooxda Real Madrid ee Hazard ayaa u muuqda mid bidaar leh, waxaana uu la soo muuqday isagoo timo lahayn, waxa uu rajeynayaa in isbeddelka tintiisa uu ku sameeyey uu wax ka badali karo nasiibkiisa Bernabeu.
Sadio Mané iyo Roberto Firmino
Labada weeraryahan ee kooxda Liverpool ayaa timuhu si weyn ugu bexeen, waxaana ugu daran xiddiga reer Brazil, kaasoo shaaribka iyo timuhu si weyn ugu bexeen, sidoo kale laacibka reer Senegal ee Mane ayaa inkastoo ay tintu ku baxday haddana u muuqda mid ay bidaari ku sikatay.
Liverpool oo dooneysa inay iska iibiso saddex ciyaartoy si ay u hesho Timo Werner